Ahoana ny manampy ny backlinks momba ny kalitaon'ny domains?
Andeha isika hanomboka amin'ny dingana farany amin'ny fikarohana karazana fikarohana. Raha mikarakara ny SEO tranonkala SEO ianao, dia tokony hihevitra koa ianao ny hampiditra backlinks amin'ny tranokalanao. Tsy ampy ny mifantina ny teny fanalahidy mety ao amin'ny tranokalanao, mamorona votoaty sarobidy ary manamboatra endri-javatra tonga lafatra. Mila miezaka ny hampahafantatra ny tranokalanao amin'ny valin'ny fikarohana ianao eo amin'ny sehatra an-tapitrisany maro hafa mifandraika amin'ny niche. Ny fomba tsara indrindra hanatsarana ny fanentanana ny marika eo amin'ny mpampiasa dia ny mamorona fanentanana fananganana rohy manodidina azy. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny lanjan'ny backlinks amin'ny tranonkala iray sy ny tena ilaina amin'ny fomba hananganana rohy ivelany mahery vaika amin'ny SEO.
Ahoana no ahafahan'ny rohy mitondra ny SEO anao?
Backlinks dia misy fiantraikany manan-danja eo amin'ny toerana misy anao eo amin'ny sehatra misy anao satria ny Google dia manombana ny fahefana amin'ny tranonkalanao amin'ny alalan'izy ireo. Zava-dehibe ho an'ny fitaovam-pitadiavana ny hahafantatra izay heverin'ny olona momba ny marikao. Izany fampahalalana izany dia manampy azy ireo hamantatra tsara ny raharaham-barotra ary hanome lanja azy io.
Vao haingana dia niady ny webmasters mba hahazoana rohy kokoa ho an'ny tranonkalany satria afaka manatsara ny fahitana ny aterineto amin'ny SERP. Na izany aza, tsy rariny izany, ary nanapa-kevitra ny hanova ny algorithm ny laharam-pamantarana i Google. Amin'izao fotoana izao ihany, ireo tranonkala manana rohy mahazatra izay manondro azy ireo, dia manana fahafahana hizaka ambony amin'ny valin'ny fikarohana Google. Ny kalitao avo kokoa, tranonkala manan-danja manondro ny toerana misy anao, ny safidy tsaratsara kokoa amin'ny fampakarana ny laharan'ireo lahatahiry Google. Amin'ny ankapobeny, ireo sehatra taloha dia mahazo rohy be dia be amin'ny fotoana raha manana toetra tsara ho an'ny olona izy ireo. Na izany aza, raha te hampandeha haingana ny dingan'ny famerenana rindran-damba tsara amin'ny tranokalanao ianao, manomboka ny tambajotra hanorina fifandraisana sy backlinks.
Ahoana no hamaritra ny kalitaon'ny backlinks?
Mampalahelo fa tsy ny backlinks rehetra no mitovy. Ny sasany amin'izy ireo dia mety handrava mihitsy aza ny lalao sy hitarika ny sazy henjana fa ny hafa kosa tsy hanome lanja anao mihitsy. Izany no antony maha-zava-dehibe ny mahafantatra ny fahasamihafana misy eo amin'ny rohy spam sy ny rohy mahazatra.
Misy fepetra sasantsasany tokony hoeritreretinao handinihana ny hatsaran'ny rohy ivelany:
Google Mankasitraka ireo tranonkala manana fahatokisana. Ny bitsika avy amin'ireo tranonkala ireo dia ho sarobidy kokoa noho ny tranokala hafa. Ohatra, loharanom-baovao toy ny Forbes, ny Huffington Post, ny BBC ary ny hafa dia hitondra sanda sarobidy aminao amin'ny endrika fifamoivoizana, mpanjifa, ary vola miditra. Na dia mety ho asa saro-bidy aza ny famerenana rindran-dalana avy amin'ireo tranonkala ireo, dia hampisy lanjany manan-danja amin'ny data sy ny fizotran'ny fifamoivoizana.
Fomba iray manan-danja ilainao tokony handinihina ny maha-zava-dehibe ny loharano iray Manangana rohy ianao. Google dia manamarina lohahevitry ny loharano iray izay mampifandray anao. Raha tsy manan-danja amin'ny indostrian'ny orinasanao ianao, dia manintona azy i Google fa tsy mitovy. Ankoatra izany, ny fametrahana rohy mankany amin'ireo loharanon-tranonkala manan-danja dia hitondra tombony bebe kokoa ho anao satria eo no ahafahanao manintona ny mpanjifa mety aminao.
PageRank no algorithm ampiasain'ny Google hametraka ny tranokalanao ao amin'ny pejin-tranonkalan'ny fikarohana. Azonao atao ny manamarina ny pejy PageRank amin'ny fampiasana ny Semalt Website Analyzer na fitaovana hafa matihanina izay afaka manome anao metrics amin'ny tranonkala mety. Tandremo fa ny toerana rehetra dia manomboka amin'ny zero. Izany no antony handinihana ireo fampahalalana hafa Source .